January 2020 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 06-06-1441
Axmad	 Jan 31, 2020 0
Dhageyso Barnaamijka Diiradda Jimcaha Oo Lagu Falanqeeyay Tallaabadii DF ay Denmark ugu gacan…
Dhageystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Halkan waxaan idiin kugu soo gudbineynaa barnaamijka…
Dhageystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Maanta waa Jimco Taariikhda hijrigu waxay ku beegan…
cusmaan	 Jan 31, 2020 1
Dhegeystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Maanta waa Jimco Taariikhda hijriguna waxay ku beegan…
Axmad	 Jan 30, 2020 0
Dhageystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 06-06-1441…
Dhegeystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Maanta waa Khamiis Taariikhda hijriguna waxay ku beegan…
Dhegeystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Saaka waa khamiis Taariikhda hijriguna waxay ku beegan…
Axmad	 Jan 29, 2020 0
Dhegeystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Maanta waa arboco Taariikhda hijriguna waxay ku beegan…
Dhegeystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Saaka waa Arbaco Taariikhda hijriguna waxay ku beegan…